လီယွန်နယ်မက်ဆီရဲ့ပီအက်စ်ဂျီအင်္ကျီ ရိုက်မလောက်အောင် ရောင်းအားကောင်းနေ - Voice Of Burma
လီယွန်နယ်မက်ဆီရဲ့ပီအက်စ်ဂျီအင်္ကျီ ရိုက်မလောက်အောင် ရောင်းအားကောင်းနေ
by Han Nyein Oo
ပီအက်စ်ဂျီဟာလီယွန်နယ်မက်ဆီအားခေါ်ယူလိုက်ပြီးနောက်မက်ဆီရဲ့ကျောနံပါတ်၃၀ပါ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းအင်္ကျီများ ရိုက်မလောက်အောင်ရောင်းအားမြင့်မားနေပါတယ်။
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာမက်ဆီကိုခေါ်ယူကြောင်းကြေညာပြီးနောက်အွန်လိုင်းစတိုးမှ လီယွန်မက်ဆီရဲ့ကျောနံပါတ်၃၀အင်္ကျီများမှာ မိနစ်၃၀အတွင်းတွင်ပင်အကုန်ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
လီယြန္နယ္မက္ဆီရဲ႕ပီအက္စ္ဂ်ီအက်ႌ ႐ိုက္မေလာက္ေအာင္ ေရာင္းအားေကာင္းေန
ပီအက္စ္ဂ်ီဟာလီယြန္နယ္မက္ဆီအားေခၚယူလိုက္ၿပီးေနာက္မက္ဆီရဲ႕ေက်ာနံပါတ္၃၀ပါ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းအက်ႌမ်ား ႐ိုက္မေလာက္ေအာင္ေရာင္းအားျမင့္မားေနပါတယ္။
ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းဟာမက္ဆီကိုေခၚယူေၾကာင္းေၾကညာၿပီးေနာက္အြန္လိုင္းစတိုးမွ လီယြန္မက္ဆီရဲ႕ေက်ာနံပါတ္၃၀အက်ႌမ်ားမွာ မိနစ္၃၀အတြင္းတြင္ပင္အကုန္ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္။
ဘာအခွန်မှ မဆောင်ထားလို့ ပေါင်တစ်သိန်းခွဲတန် Aston Martin Vantage ကား ဘီးချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဒီဂီယာ
အသင်းမှထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့ မက်ဆီကို အကြွေးယူရို ၃၉ သန်းပေးဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ ဘာစီလိုနာ
နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ် သင်္ကြန် အတက်နေ့မှာ...
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်အမျိုးသမီးတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုး...
Breaking News • Local News
PDF တပ်ဖွဲ့ဝင် ကိုစိုးဝင်းနိုင်(ခ) ခေါခေါ နှင့်...
🔴 တစ်ပတ်ကြာ လျပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မည့် မြို့နယ်များ
Articles • Breaking News • Local News
ယနေ့ နယူးယောက်မြို့က NUG၏ အောင်ပွဲ..
Local News • နောက်ဆုံးရသတင်းများ
🔴 ရုရှားက ယူကရိန်းအပေါ် ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများ...
Copyright © 2022. Created by Han Nyein Oo.